Kachin 5-Nuts (100g) (ကချင် ငါးပေါက်သီး) – SUNNY eSTORE
Made in Myanmar Products
Kachin 5-Nuts (100g) (ကချင် ငါးပေါက်သီး)
5-nuts areanut from Kachin, also called Dracontomelon dao. They areaunique snack and difficult to find in Myanmar. Each package includes 5-nut kernels and two shells to show the unique style of the fruit.
5-nuts havearich taste,abit similar to peanuts but withamore earthy and flavorful taste. They make an excellent addition to any dessert, salads, or asaregular snack.
Packing includes - 100g shelled 5-nuts + 5-nut kernal
ကချင်ပြည်နယ် ဒေသထွက် အခွံမာသီးတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး Dracontomelon dao ဟုလည်းခေါ် ကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ ဒေသ ထွက် ရှားပါးသည့် အခွံ မာသီး တစ်မျိုးလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ငါးပေါက်သီး အထုတ်တိုင်းတွင် စားသုံးရန်အဆံ (၅၀)g နှင့် ငါးပေါက်သီး အခွံ ဖြင့် ၂ လုံး ပါရှိပါသည်။
ငါးပေါက်သီးအရသာသည် တမူထူးခြားပြီး မြေပဲ အရသာနှင့်လည်း အနည်းငယ် ဆင်တူသည်။ ငါးပေါက်သီးအဆံ ကို အသုတ်စုံ နှင့် ပုံမှန်မုန့်ပဲသရေစာ အနေဖြင့်လည်းပြုလုပ်စားသုံးလေ့ရှိသည်ငါးပေါက်သီး၏ အခွံသည် အလွန်မာကျောပြီး အသီးတိုင်းတွင် အဆံငါးစေ့ပါရှိသည်။ ဒေသခံများမှ ငါးပေါက်သီးများကို အခြောက်လှန်းပြီးမှသာ အထဲမှ အဆံများကို ထုတ်ပြီး စားသုံးကြပါသည်။
Use: Eat asasnack. Ingredients: Dracontomelon Dao အသုံးပြုပုံ - မုန့်သရေစာကဲ့သို့ အသင့်စားသုံးနိုင်သည် ပါဝင်ပစ္စည်း - ငါးပေါက်သီး